XOG: Madaxda sare ee Maamulka Jubaland ooh al arrin isku haysta |
XOG: Madaxda sare ee Maamulka Jubaland ooh al arrin isku haysta
Wararka laga helaayo Magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in Masuuliyiinta sare ee maamulkaasi ay isku qilaafsan yihiin shaqsiga Madaxweynaha Maamulkaasi ku simaha u ahaan lahaa xiliga uu safarka yahay.
Doorashada maamulkaasi ka hor ayaa waxaa ku simaha Axmed Madoobe ku magacawnaa Madaxweyne kuxigeenka koowad ee Maamulkaasi, waxaana hada tirada kusoo biiray Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulkaasi Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan.
Axmed Madoobe oo Safar ugu ambabaxay Magaalada Nairobi ee Xarunta dalka Kenya ayaa waxa uu ku simihiisa ka dhigay Gudoomiyaha Baarlamaanka Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, halka ku xigeenadiisii hore ay go’aankaasi ka carooden isaga oo aan u sheegina ka dhoofay garoonka Kismaayo.
Waxa ay xasarad Siyaasadeed ka dhex abuurtay Masuuliyiinta ugu sareysa, waxaana suuragal ah in qilaafkaani uu sababo kala fogaanshaha Axmed Madoobe iyo Masuuliyiintaasi.
Axmed Madoobe ayaa doonaya in ku-xigeenkiisa uu ka dhigto Madaxweyne ku-xigeenkii hore C/llaahi Ismaaciil Fartaag, halka Suldaan C/qaadir Lugadheere uu daaqada ka bixi doono.